MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဒီဇင်ဘာ 2017 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဒီဇင်ဘာ 2017
MPT ၏ LTE+ ကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်) – MPT ၏ အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး LTE+ ကွန်ရက်ကို ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်တို့တွင် အသုံးပြု နေနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ဆု ရရှိထားသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသီးသီးသို့ တိုးချဲ့လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်စေရေးအတွက် ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်နေသည်နှင့်အညီ အဆင့်မြင့် LTE+ ကွန်ရက်ကို ဆက်လက်ဖြန့်ကျက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်မားသည့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုကို ထောင်ပေါင်း များစွာသော သုံးစွဲသူများထံ တစ်ပြိုင်နက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဟားခါးမြို့တွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အင်တာနက်သုံးခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ HD ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းတို့ကို အလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးဖြင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် မကြာသေးမီကလည်း LTE+ 4×4 MIMO ကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ နည်းပညာနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ (မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ) ဖြင့်အသုံးပြုပါက အမြန်နှုန်း 300Mbps အထိ ရရှိနိုင်မည့် အကြောင်း မိတ်ဆက် ကြေညာခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
MPT LTE+ ကို ဟားခါးမြို့တွင် တိုးချဲ့ဖြန်ကျက်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူ ယခုအခါ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ပေါင်း ၈၂ မြို့တွင် ယင်းကွန်ရက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT အတွက် လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နှစ်တစ်နှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကုန်တွင် LTE+ ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ပေါင်း ၂၈၀ တွင် ဖြန့်ကျက်သွားရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကွန်ရက်နည်းပညာ နှင့်ကိုက်ညီသည့်မည်သည့် 4G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အမျိုးအစားတွင်မဆို ၎င်းတို့ရှိ ဖုန်း settings တွင် 4G network ကို ဖွင့်ထားပေးခြင်း သို့မဟုတ်နီးစပ်ရာ MPT အမှတ်တံဆိပ်ပါရှိသော အရောင်းဆိုင်များ ထံသွားရောက်ကာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် အကောင်းဆုံး ကွန်ရက်ကိုချိတ်ဆက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ဆုရရှိထားတဲ့ LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း အသုံးပြုသူတွေက အံ့အားသင့် ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အသုံးပြုနေတာကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LTE+ ကွန်ရက်ကို ဟားခါးနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတို့မှာ မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အခုလို အရေးပါတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ တိုးချဲ့ချိတ်ဆက် နိုင်ခြင်းဟာ MPT LTE+ ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းက ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အသီးသီးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းနဲ့အတူ အသုံးပြုသူတွေက အင်တာနက်ကို အရင်ထက်ပိုပြီးလျင်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။ ဟားခါးနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးက အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဟန်းဆက်တွေမှာ 4G ကိုဖွင့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြန်ဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်ပေါ်ကနေ သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေ နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် MPT ၏ ၁၀၆ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် www.mpt.com.mm နှင့် MPT ၏ တရားဝင် Faceook စာမျက်နှာဖြစ်သည့် https://www.facebook.com/mptofficialpage တို့တွင် ဝင်ရောက်စုံစမ်းသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 28, 2017 ဒီဇင်ဘာ 29, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
2 Mbps အမြန်နှုန်းအတွက် တစ်လလျှင် ၃၉,၀၀၀/- ကျပ်သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ download လုပ်နိုင်မည့် MPT ၏ FTTH အင်တာနက်အစီအစဉ်သစ်သည် သုံးစွဲသူများအတွက် လူမှုမီဒီယာများ၊ မျာပြားလှသော မီဒီယာကဏ္ဍများ၊ download ရယူခြင်းများနှင့် ဖျော်ဖြေမှုများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခနှုန်းထားများကို ယခင် ၂၀၀,၀၀၀/- ကျပ်မှ ယခု ၅၀,၀၀၀/- ကျပ်အထိ လျှော့ချပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။ Continue reading “ MPT က FTTH အစီအစဉ်သစ်များကို သင့်တင့်သော စျေးနှုန်းဖြင့်မိတ်ဆက်”
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 27, 2017 ဒီဇင်ဘာ 27, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 26, 2017 ဒီဇင်ဘာ 27, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT ၏ ပိုမြန်သည့်ဒေတာအမြန်နှုန်း၊ ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြားတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အနာဂတ်၏ LTE+ နည်းပညာ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ MPT သုံးစွဲသူများအတွက် မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကွန်ရက်များ၊ ကောင်းမွန်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို အစဉ်အမြဲ အလေးထားဆောင်ရွက်နေသည့် MPT သည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည့် LTE+ ကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ PARKROYAL ဟိုတယ်တွင် ယနေ့ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။
“မြန်မာ့အမြန်ဆုံး မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်” ဆုရထားသည့် MPT သည် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲသူများအားလုံး အတွက် အမြန်နှုန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ယခုလည်း နောက်ဆုံးပေါ် 4×4 MIMO နည်းပညာအသုံးပြုထားသည့် LTE+ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် bandwidth ပမာဏကို ယခင်ကထက် နှစ်ဆတိုးမြှင့်လိုက်သည့်အတွက် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ယခင်ကရရှိခဲ့သည့် နှုန်းထားထက် နှစ်ဆပိုမိုမြန်ဆန်သည့် 300 Mbps အထိ အမြင့်ဆုံးအဖြစ် တိုးမြှင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာကိုက်ညီသည့် မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားဖြင့်မဆို Download/Upload ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် High Resolution ဗွီဒီယိုများကို ကြာရှည်စွာ စောင်းဆိုင်းရန်မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် MPT က Carrier Aggregation ဟုခေါ်သည့် နည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုမှုမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မှုကို ဇန်နဝါရီလအတွင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Junction Mawtin, Junctioin Square နှင့် တော်ဝင်စင်တာ စသည့် စျေးဝယ်စင်တာများတွင် စတင်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါနေရာများရှိ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြံုကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် မတူညီသည့် LTE+ Frequency Bands နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်စေခြင်းဖြင့် MPT ၏ ဖုန်းလိုင်းကို အသုံးပြုသူများအတွက် LTE+ အတွင်း အလွှာအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်စေကာ အမြန်ဆုံးဒေတာ နှုန်းထားတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် MPT ၏ LTE+ အတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ် သုံးခုကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံးသော ဒေတာနှုန်းထားဖြစ်သည့် 800Mbps အထိကိုပင်ရရှိစေပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမြန်ဆုံးနှုန်းထားတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ကျောက် တင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် ဒေတာကွန်ရက်၏ အရေးပါမှုကို နားလည်သိရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုသူ အများအပြားသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ကွန်ရက်ပေါ်မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လိုအပ်လျက် ရှိသည်ကိုလည်း နားလည်ထားပါသည်။ ယင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် အနာဂတ်၌ ပြောင်းလဲလာမည့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အရည်အသွေးများကို လက်တွေ့ သရုပ်ပြ ခဲ့ပါသည်။ Voice over LTE (VoLTE) ဟုခေါ်သော နည်းပညာသည် ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သား သောအသံ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် နောက်ခံ ဆူညံသံ နည်းပါးသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် မြန်မာနို်င်ငံ၏ ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းလ် ကွန်ရက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် အနာဂတ်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အရည်သွေးများကို မီဒီယာများသို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပေး နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ VoLTE နဲ့ ဆိုရင် ကိုယ့်ဘေးနားမှာ လာထိုင်ပြီး စကားပြောနေသလိုပါပဲ” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Technical Officer ဖြစ်သူ Mr. Noboru Edagawa က ပြောကြားပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် MPT က LTE+ ကွန်ရက်ကို မြို့နယ်ပေါင်း (၂၈၀) ရှိ သုံးစွဲသူများထံသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အကုန်တွင် ဖြန့်ကျက်ချိတ်ဆက် ပေးသွားနိုင်မည့်အကြောင်းကို ကြေညာနိုင်သည့်အတွက် အထူးပင် စိတ်လှုပ်ရှား ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ MPT ရဲ့ နောက်ထပ်မှတ်တိုင်အသစ်ဖြစ်သည့် မြန်မာ့အမြန်ဆုံး MPT LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
Mr. Noboru Edagawa က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် “ဒီနှစ်အစောပိုင်းက LTE+ ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ ပြီးတဲ့နောက် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဒေတာ သုံးစွဲမှုနှုန်း အဆမတန် မြင့်တက်လာတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အပြင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ပိုမိုလျင်မြန်တဲ့ ဒေတာအမြန်နှုန်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်မယ့် LTE+ ကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကို ကြေညာနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး Voice over LTE လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့အတူ အနာဂတ်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမယ့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို သရုပ်ပြသဖို့အတွက် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက ပိုမိုကြည် လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံခေါ်ဆိုမှုတွေကို နောက်ခံဆူညံသံအနည်းဆုံးနဲ့ ကြားရနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ MPT ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် LTE+ ကွန်ရက်ကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးက ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအားလုံးမှာ မကြာမီအချိန်အတွင်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 21, 2017 ဒီဇင်ဘာ 21, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 15, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ ပျော်ရွင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူးကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT အနေဖြင့် အသုံးပြုသူ ၂၆သန်းကျော်အတွက် အကြီးမားဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးသောဆုများကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ဆုများကို ပေးအပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိရာ MPT က “ပျော်ရွှင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူး” ကံစမ်းမဲ အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်မှစတင်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့အထိ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးသွား တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယခုနှစ်အတွက် ပြန်လည်စတင်လိုက်သည့် MPT ၏ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် iPhone X အလုံး ၃၀၊ Toyota Vios ကား ၃ စီး အပြင် အထူးဆုကြီးတစ်ဆုအဖြစ် စတားစီးတီးကွန်ဒိုမီနီယမ်မှ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတို့ကို ထည့်သွင်းပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT မှ အနေဖြင့် အသုံးပြုသူများကို ယခုကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် စီစဉ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော MPT ၏ ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းလ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရုံဖြင့် ပျော်ရွှင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ယခုကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်သည် ဖုန်းဘီလ် ၁ ထောင်ကျပ်ကိုအသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် အလိုအလျောက် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကာ နောက်ထပ်ကံစမ်းခွင့်ကိုလည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲကာလအထိ ဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖုန်းဘီလ်အရေအတွက် ပိုမိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကံထူးရှင်ဖြစ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းဘီလ် ၁,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး ၁ ဆ
ဖုန်းဘီလ် ၅,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး ၅ ဆ
ဖုန်းဘီလ် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး ၁၀ ဆ
ဖုန်းဘီလ် ၁၅,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး ၁၅ ဆ
ဖုန်းဘီလ် ၂၀,၀၀၀ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး အဆ ၂၀
ဖုန်းဘီလ် ၂၅,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး ၂၅ ဆ
ဖုန်းဘီလ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ဆုရရှိရန် အခွင့်အရေး အဆ ၃၀
MPT ၏ ပျော်ရွှင်ကံထူးနှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ဆင်နွှဲကြသော သုံးစွဲသူများအတွက် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ နှင့် ၂၇ ရက်တို့တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း MPT၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် (Live) ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၏ ကနဦး ဆုကြီးသုံးဆုတွင် iPhone X ရ လုံးနှင့် Toyota Vios ၁ စီးတို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် MPT အသုံးပြုသူများကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု များပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုများကို အခြားသော MPT အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ မျှဝေပေးသွားမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
အထူးဆုဆုမဲကိုမူ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပလာဇာ၌ ရွေးချယ်မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး iPhone X ၉ လုံးနှင့် အထူးဆုကြီးအနေဖြင့် သန်လျှင်မြို့နယ်ရှိ Star City ကွန်ဒိုမီနီယမ်မှ ကွန်ဒိုခန်းအသစ် ၁ လုံး တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ “Community withinacommunity” Star City ကွန်ဒိုမီနီယမ်တွင် နေထိုင်သူများ သည် ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်၊ အကြောပြေ အနှိပ်ခန်း ၊ ၉ ကျင်းပါ ဂေါက်ကွင်း ၊ ဘဏ်၊ အချိန်ပြည့် လုံခြုံ ရေးစနစ်အပြင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည့် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြား လိုအပ်သော လုပ်ငန်းအမျိုး မျိုး တို့ကို တစ်နေရာအတွင်း၌ပင် ရယူအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သော Mr.Reizo Umeda က “MPTက ဒီနှစ်အတွက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခ့တဲ ာကို တကယ်ကိုပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဆုလက်ဆောင်တွေကလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီးများပြားကောင်းမွန်လာတဲ့အပြင် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် မှာ ပါဝင်ဖို့လည်း ပိုမိုလွယ်ကူလာပါပြီ။ ဒါ့အပြင် iPhone X ကံထူးသူတွေလည်း MPT ရဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် 4×4 MIMO 4G ကွန်ရက်ရဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ အင်တာနက် အတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT ကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် အားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ နှစ်ကုန် အားလပ်ရက်အချိန်တွေမှာ ဆုကြီးတွေပေးအပ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကံစမ်းမဲ့အစီအစဉ်မှာ မြန်မြန်ပါဝင်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပျော်ရွှင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူး အထူးကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Customer Care Service ဖုန်းနံပါတ် (၁၀၆)သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 12, 2017 ဇန်နဝါရီ 9, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Lucky Draw FAQs MM
GENERAL » Lucky Draw
၁။ MPTရဲ့ ပျော်ရွှင်ကံထူးနှစ်သစ်ကူး အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
• MPTသည် ပျော်ရွှင်ကံထူးနှစ်သစ်ကူး အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်မှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက်အထိ စီစဉ်ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “အသုံးပြုမှု” ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။ ဘယ်လိုအသုံးပြုမှုမျိုးက ပျော်ရွှင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်မှာပါ၀င်ခွင့်အတွက် အကျုံးဝင်မှာပါလဲ။
• မိမိ၏လက်ကျန်ငွေ(Main Balance)အတွင်းမှ အသုံးပြုမှုအားလုံးသည် အကျံူးဝင်ပါသည်။ ( သုံးသလောက်ပေးစနစ်ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ သုံးသလောက်ပေးစနစ်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်း နှင့် VAS ၀န်ဆောင်မှုများရယူအသုံးပြုခြင်း)
• Bonus အတွင်းမှ အသုံးပြုမှုများ အကျံူးမဝင်ပါ။
၅။ သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ကံစမ်းမဲပေါက်ရန်အခွင့်အရေး ဘယ်လောက်ရရှိနို်င် ပါသလဲ။
• အနည်းဆုံးဖုန်းဘီလ် (၁၀၀၀)ကျပ်ပြည့်မီအောင်အသုံးပြုရုံဖြင့် အနီးဆုံးကံထူးရှင် ရွေးချယ်မည့်နေ့ ( အနီးဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) မှစ၍ အထူးဆုရွေးချယ်ပွဲအချိန်အထိ အပတ်စဉ်ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
• အောက်ဖော်ပြပါ ပမာဏအထိသုံးစွဲမှုများပြုလုပ်ပါက ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန် အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ၅၀၀၀ကျပ်အထိအသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး (၅)ဆ ပိုမိုရရှိမည်။
– ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိအသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး (၁၀)ဆ ပိုမိုရရှိမည်။
– ၁၅၀၀၀ကျပ်အထိအသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး (၁၅)ဆ ပိုမိုရရှိမည်။
– ၂၀၀၀၀ကျပ်အထိအသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး အဆ(၂၀) ပိုမိုရရှိမည်။
– ၂၅၀၀၀ကျပ်အထိအသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး (၂၅)ဆ ပိုမိုရရှိမည်။
– ၃၀၀၀၀ကျပ်နှင့် အထက်အသုံးပြုပါက ၁၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုခြင်းထက် ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေး အဆ(၃၀) ပိုမိုရရှိမည်။
ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးလျှင် အများဆုံးတစ်ကြိမ်သာ ကံထူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇။ ကံထူးရှင်ဖြစ်ကြောင်း MPT က ဖုန်းခေါ်ဆိုအသိပေးတာကို ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဆိုဘာဖြစ်မှာပါလဲ။
• ဖုန်းခေါ်ဆို၍မရသည့် ကံထူးရှင်များအား အမ်ပီတီသည် နောက်ထပ် ၅ရက်အထိ ( အင်္ဂါနေ့အထိ) ဆက်လက်ခေါ်ဆိုနေမည်ဖြစ်သည်။
• ယင်း၅ရက်အတွင်းလည်း ဆက်သွယ်၍မရပါက ယင်းဆုပစ္စည်းများကို အပတ်စဉ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးအပတ်အစီအစဉ်တွင် ထည့်ပေါင်းပေးကာ ကံထူးရှင်အသစ် ပြန်လည် ရွေးချယ်သွားမည်။
• အထူးဆုရွေးချယ်မည့် နောက်ဆုံးအပတ်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်- ကံထူးသည့် ဖုန်းနံပါတ်များထံ ၃ကြိမ်ဆက်တိုက် ခေါ်ဆိုရမည်။အကယ်၍ ဆက်သွယ်၍ မရပါက အမ်ပီတီသည် ယင်းဆုပစ္စည်းကို ကျော်ထားခဲ့ပြီး အခြားဆုပစ္စည်းများအတွက် မဲနှိုက်မည်။ ကံစမ်းမဲနှုှိက်သည့် အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါ ကျော်ထားခဲ့သည့် ဆုပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ထပ်မံခေါ်ဆိုမည်။ အကယ်၍ အဆက်အသွယ်မရပါက အမ်ပီတီသည် ယင်းဆုပစ္စည်းအတွက် ကံထူးရှင် ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ကျွန်တော်က Toyota Viosကား ကံထူးပါတယ်။ ဘယ်လိုဆုထုတ်ယူရမှာပါလဲ။
• Toyota Viosကား ကံထူူးရှင်များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ဖိတ်ခေါ်ကာဆုချီးမြှင့် မည်ဖြစ်ပါ သည်။
• ဆုချီးမြှင့်ပွဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိီးသန့်အသိပေးအကြောင်းကြား မည် ဖြစ်ပါသည်။
• သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို MPT အဖွဲ့/ Toyota အဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ဖြည့်စွက်ရမည််ဖြစ်သည်။
၂။ ပျော်ရွှင်ကံထူးနှစ်သစ်ကူး အစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါ၀င်နိုင်မှာပါလဲ။
• MPT GSM/WCDMA/CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသော မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသူများအားလုံး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
• အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်မှစ၍ အနည်းဆုံးဖုန်းဘီလ် (၁၀၀၀)ကျပ်အသုံးပြုရုံဖြင့် ပျော်ရွှင်ကံထူး နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်တွင် အလိုအလျောက်ပါ၀င်ကံစမ်းခွင့်ရရှိကြောင်း MPT က အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကံထူးရှင်ဖြစ်ခွင့်ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
• ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်တွင် Toyota Vios 2017 ကား(၁)စီး၏ ကံထူးရှင်နှင့်7iPhone Xကံထူးရှင်(၇)ဦးတို့ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
• ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်တွင် Toyota Vios 2017 ကား(၁)စီး၏ ကံထူးရှင်နှင့်7iPhone Xကံထူးရှင်(၇)ဦးတို့ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
• ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃)ရက်တွင် Toyota Vios 2017 ကား(၁)စီး၏ ကံထူးရှင်နှင့်7iPhone Xကံထူးရှင်(၇)ဦးတို့ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
• ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက်တွင် Star City Condiminiumအသစ်(၁)ခန်း ၏ ကံထူးရှင်နှင့်7iPhone Xကံထူးရှင်(၉)ဦးတို့ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
၆။ ကံထူးရှင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မှာပါလဲ။
• ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃)ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက် တို့တွင် ကံထူးရှင်များကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
• အဆိုပါနေ့များတွင် ကံထူးရှင်များကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ကံထူးရှင်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
• ကံထူးရှင်ရွေးချယ်မှုကို MPT official Facebook Page တွင်တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ကျွန်တော်က iPhone X ကံထူးပါတယ်။ ဘယ်လိုဆုထုတ်ယူရမှာပါလဲ။
• iPhone X ကံထူူးရှင်များကို MPT ဗိုလ်အောင်ကျော်ရုံးသို့ဖိတ်ခေါ်ကာ ဆုချီးမြှင့် မည်ဖြစ်ပါသည်။
• ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ဆုကြေညာပြီးနောက် အနီးဆုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကျွန်တော်က ကွန်ဒိုမီနီယမ် ကံထူးပါတယ်။ ဘယ်လိုဆုထုတ်ယူရမှာပါလဲ။
• ကွန်ဒိုမီနီယမ်ကံထူူးရှင်များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ဖိတ်ခေါ်ကာဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
• ဆုချီးမြှင့်ပွဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိီးသန့်အသိပေးအကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
• သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို MPT အဖွဲ့/ Star City အဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ဖြည့်စွက်ရမည််ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 12, 2017 Categories Personal Pagemm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 11, 2017 ဒီဇင်ဘာ 13, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT4U FAQs MM
GENERAL » MPT4U
၁။ MPT4U App ဆိုတာဘာလဲ။
MPT အသုံးပြုသူတို့အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ဖုန်းဘေအသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းစစ်ဆေးခြင်း အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံတို့ကို တစ်နေရာထဲမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။MPT4U app ကို မြန်မာဘာသာဖြင့်အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသည်။
၂။ MPT4U App ကိုဘယ်လို Download ရယူရမလဲ။
MPT4U App Download & Install လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဒီလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Android ဖုန်းများအတွက် *4040# ကိုခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း ၊ လိုတရဝက်ဆိုက်ဒ်မှ သော်လည်ကောင်း အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ IOS အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ MPT4U APP ကို App Storeမှသာလျှင် download / update ဆွဲ၍ရယူနိုင်ပါသည်။ iOS အတွက် MPT4U App Download ကအခမဲ့မဟုတ်ပါ။ App Store မှအင်တာနက်ကုန်ကျမှုဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ MPT4U Appကိုဘယ်လိုUpgradeလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Update Nowဆိုသော ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် (သို့) *4040# ကိုခေါ်ဆို၍လည်း အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ပြုနိုင်မှာပါ။ IOSအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မူ App Storeတစ်မျိုးတည်းမှသာ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ MPT4U App ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
MPT4U App ကို အသုံးပြုရန် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းတစ်ဆင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၁) ဖုန်း အင်တာနက်ဖွင့်ပါ။
(၂) ဖုန်းထဲရှိ MPT4U App ထဲသို့ဝင်ပါ။
(၃) App ၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိပါမည်။
App ၏ပင်မစာမျက်နှာ တွင်မိမိအသုံးပြုလိုသောဝန်ဆောင်မှု့များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ MPT4U App ကနေ ဘာဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနိူင် ရယူနိုင်သလဲ။
MPT4U app မှတစ်ဆင့်
-နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် ဖုန်းဘေလ်နှင့်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု၏ဝန်ဆောင်ခများစစ်ဆေးခြင်း ၊
-ပက်ကေ့ချ် လက်ကျန် ပမာဏများ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
-ရယူထားသော ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
-Call Service ဝန်ဆောင်မှု့များ ရယူနိုင်ခြင်း၊
-FAQ များ ဖတ်ရှု့နိုင်ခြင်း၊
-MPT Ring Tune ရယူခြင်း၊
-MPT Club ပွိုင့်များ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊
-လိုတရ ပေ့ချ် သို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှု များပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊
-MPT4U ဂိမ်း ဝန်ဆောင်မှု အစရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၆။ MPT4U App ကိုအခြားဘယ် Network နဲ့ မဆိုသုံးလို့ရနေပြီလား။
MPT Network သာမက အခြား Network နှင့်လည်းကောင်း၊ Wifi ဖြင့်လည်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရပါသည်။ MPT Network ဖြင့်ဝင်ရောက်ပါက အင်တာနက် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
၇။ MPT4U Version အသစ်ကဘာလဲ။ Version အသစ်ကို အသုံးပြုရန် အနိမ့်ဆုံး Android နဲ့ iOS ဗားရှင်းကဘယ်လောက်ရှိရမှာလဲ။
IOS : 1.4.0 နှင့် Andorid : 4.3.0 ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Android ဗားရှင်း “ 5” ထက်နိမ့်ပြီး iOS ဗားရှင်း “ 9” ထက်နိမ့်လျှင် အသုံးပြုမရပါ။
၈။ သတ်မှတ်ထားသည့် version ထက်နိမ့်နေသော ဖုန်းများသည် MPT4U Versionအသစ်ကိုအသုံးပြုရန် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်နိူင်ပါသလား။
အသုံးပြုသူသည် အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်နိူင်သော်လည်း တစ်ချို့လုပ်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ အလိုအလျောက် အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှထွက်သွားလိမ့်မည်။
၉။ မိမိဖုန်းတွင် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ။
Side bar menu အောက်ရှိ Setting page မှာသွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Side bar menu ထဲက -> Setting အောက်ရှိ Language ကိုရွေးပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ MPT4U အဟောင်းကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနိူင်ပါသလား။
လက်ရှိတွင် MPT4U အဟောင်းကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနိူင်သော်လည်း ဗားရှင်းအသစ်ကို (၃)လအတွင်း update လုပ်ပေးဖို့လိုပါသည်။
၁၂။ MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအဟောင်းတွင် "ထိပေါက်" ကိုကစားနိုင်ပါသလား။
MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအဟောင်းတွင် “ ထိပေါက်” ကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုအတွင်း ပုံမှန်အတိုင်းကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အသစ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအသစ်ကို အသုံးပြုပြီး ထိပေါက်ကစားပြီး ကံစမ်းကြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
၁၃။ MPT Club member များအတွက်ပေးသော Free chance များကို MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းဗားရှင်း အဟောင်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသလား။
အကယ်၍ အက်ပလီကေးရှင်း အဟောင်းတွင်သာ log in ဝင်ပြီးအသုံးပြုပါက မူလအဟောင်းအတိုင်းသာ Free chance ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်း အသစ် (သို့) new website အသစ်တွင် log in ဝင်ပြီးအသုံးပြုပါက Lucky Draw Free chance ကို အသစ်မှရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အက်ပလီကေးရှင်း အဟောင်းကိုထပ်မံအသုံးပြု၍ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအသစ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၁၄။ MPT4U Web အသုံးပြုသူသည် ဘာကြောင့် အက်ပလီကေးရှင်း အဟောင်းကို အသုံးပြု၍မရတော့ပါသလဲ။
MPT4U Website တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအသစ်ကိုသာ Support လုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်း အဟောင်းကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့်အခါ ရရှိသော lucky draw chance များအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ဗားရှင်း ကိုဖွင့်ပြီး အသုံးပြုရန် pop up မက်ဆေ့ပို့၍ သတိပေးလိမ့်မည်။
၁၅။ USSD ဖြင့်ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူပြီးနောက် ရရှိသော ထိပေါက် chance များကို SMS မှတဆင့်ပေးပို့ပြီးသော်လည်း MPT4Uအက်ပလီကေးရှင်း ထဲတွင်ဘာကြောင့်မတွေ့ရှိရပါသလဲ။
MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီးသည့်နောက်တွင် USSD အပါအဝင် အခြား channel များမှပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခဲ့ပါက ရရှိသော chance များသည် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်းအသစ် ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဗားရှင်းအသစ်တွင်သာ သွားရောက်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၆။ မိမိဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်များ ဘေလ်လက်ကျန်များကို စစ်ဆေးလိုပါက MPT4U ဗားရှင်းအသစ်တွင် ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ။
Side bar menu ထဲက ->Account detail page မှာသွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၁၇။ Home screen မှာ Icon ဘယ်နှခုထိ ထားလို့ရမလဲ။? အဲ့Icon လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲ။
Icon (၁၁)ခုထိ ထားလို့ရပါတယ်။ Icon လေးတွေပြောင်းရွေ့ဖို့ရန်အတွက်Service ထဲမှာ edit ကို click လုပ်ပြီး Icon လေးတွေကို drag လုပ်၍ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့မြင်ရမည့် icons ၄ ခုကိုတော့ ကိုယ်လိုချင်သလို ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Default ထားထားခြင်းအတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၁၈။ Home screen မှာမြင်ရတဲ့ Privilegeအိုင်ကွန်လေးသည် မည်သည့်အတွက်ထားရှိထားတာပါလဲ?
Privilege icon သည် MPT Club နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိလိုပါက ၎င်း icon ကိုနှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ Account Details တွင်ဖော်ပြထားသော Balance, Daily Usage, Top Up History, Order History များကို မည်သည့်ရက်ပေါင်းအတွင်း စစ်ဆေးလို့ရနိူင်မလဲ။
Account Details တွင် Balance ကို Real Time Balance အဖြစ် စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Daily usage ကို ရက် ၉၀ ထိနှင့် လက်ရှိ အချိန်ထိစစ်ဆေးနိုင်ပြီး Top Up History နှင့် Package Purchase History များကို (၆) လစာစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀။ ထိပေါက် ကစားပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်ထားသည်များကို စစ်ဆေးလို့ရပါသလား။
ထိပေါက် ကစားပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်ထားသည်များကို main page ရှိ Lucky Draw ကို နှိပ်ပြီးထိပေါက် Historyတွင် (၇)ရက်ထိစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
၂၁။ My Profile မှာပါတဲ့ % ကဘာလဲ။
၂၂။ Package Purchase page တွင်ပေါ်နေသော Gift icon ဆိုတာဘာလဲ။
MPT သုံးစွဲသူ အချင်းချင်း လက်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
၂၃။ MPT4U game ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။ မည်သို့ကစားရမလဲ။
MPT4U ၏မူလစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် game icon အားနှိပ်၍ MPT4U game များကို ဆော့ကစားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၂၄။ MPT4U game ကို မည်သူတွေပါဝင်ကစားခွင့်ရှိပါသလဲ။
MPT4U App အား ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် MPT အသုံးပြုသူများ ပါဝင်ကစားခွင့်ရှိပါသည်။ MPT ကဒ်အသုံးပြုပြီး MPT4U App အားမထည့်သွင်းရသေးသူများ အနေဖြင့်လည်း အောက်ပါလင့်မှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း *4040# အားခေါ်ဆို၍ ဒေါင်းလုတ်လင့်ရယူ၍လည်းကောင်း MPT4U App အားဖုန်းတွင် ထည့်သွင်း၍ ပါဝင်ကစားနိုင်ပါသည်။
ဒေါင်းလုတ်ရယူရန်လင့် – https://bit.ly/MPT4Ufree
၂၅။ MPT4U game မှာ game ဘယ်လောက်ပါဝင်မှာလဲ။
အနည်းဆုံး game ပေါင်း (၅) ခုပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၆။ Game တွေကို ကစားရင် ဒေတာဖိုး ကုန်ကျပါမည်လား။
MPT4U game များကစားရာတွင် မည်သည့်ဒေတာဖိုးမျှပေးရန် မလိုပဲ အခမဲ့ဒေတာဖြင့် ကစားနိုင်ပါသည်။
၂၇။ Game တွေကို ကစားရင် မည်မျှပေး၍ ကစားရမလဲ။
Game ကစားသူများသည် Game များကို အောက်ပါအခြေအနေနှစ်မျိုးနှင့် ကစားနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ပွဲစဉ်များ – ကစားသူများအနေဖြင့် မည်သည့်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ကစားနိုင်ပါသည်။ ဝင်ကြေးပေးပွဲစဉ်များ – ကစားသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ကြေးပေး၍ ကစားနိုင်ပါသည်။
၂၈။ အခမဲ့ဂိမ်းတွေအတွက် ဆုလက်ဆောင်တွေပါမည်လား။
အခမဲ့ဂိမ်းများအတွက် ဆုလက်ဆောင်များပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရောက်ကစားသူများအတွက် ဒေတာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်၊ စာတိုမက်ဆေ့ အစရှိသည့် ဆုများအပြင် ဖုန်း၊ ရွှေဒင်္ဂါးပြားများစသည့် ဆုလက်ဆောင်များကို ကစားသမားများ၏ ရမှတ်များပေါ်မူတည်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆုလက်ဆောင်များ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၂၉။ ဂိမ်းကစားခြင်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။
သတ်မှတ်ထားသည့် ပွဲစဉ်အချိန်များအတွင်း အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူသည် ပထမနေရာကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး အခြားသော အဆင့်များကိုလည်း အမှတ်ပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားချိန်အတွင်း အမှတ်တူနေ ရှိနေပါက ရမှတ်ပထမဆုံး ရရှိသူသည့် အဆင့်ပိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၀။ ဝင်ကြေးပေး၍ ကစားရသောဂိမ်းများအတွက် ဆုလက်ဆောင်ဟာ မည်သည့်အရာများဖြစ်သလဲ။ ဝင်ကြေး မည်မျှရှိမည်နည်း။
ဝင်ကြေးပေးရသော ဂိမ်းများအတွက် ဆုလက်ဆောင်များအဖြစ် MPT ဘေလ်များကို ရမှတ်နှင့်အဆင့်အလိုက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ကြေးမှာ အနည်းဆုံး ၉၉ကျပ်မှ စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၁။ ဆုရရှိသူများသည် မည့်သည့်အချိန်တွင် လက်ဆောင်များရရှိပါမည်နည်း။
ဆုရရှိသူများသည် ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသည့် အချိန်မှစတင်၍ ၁၀ရက်အတွင်း လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၂။ ဆုရရှိသည့်အခါ စာတိုဖြင့် အကြောင်းကြားမည်လား။
ရရှိသည့်ဆုအား ပေးအပ်သည့်အခါတွင် စာတိုဖြင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကစားသမားများသည် မိမိရရှိသည့် အဆင့်နှင့်ဆုလက်ဆောင်များကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေစဉ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြီးဆုံးသွားသည့်သော်လည်းကောင်း ဂိမ်းစာမျက်နှာတွင် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၃၃။ အကယ်၍ ဂိမ်းကစားသူသည် ယခုပြိုင်ပွဲများအပြင် ယခင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ တယ်လီကွန်းဆုများ ဆွတ်ခူးထားပါက ဆုလက်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းကို မည်ကဲ့သို့ဖြတ်တောက်သွားမည်နည်း။
တယ်လီကွန်းဆုလက်ဆောင်များ၏ သက်တမ်းသည် (၇)ရက်ဖြစ်ပါသည်။ တယ်လီကွန်းဆုလက်ဆောင်အား အစောပိုင်းရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အား စတင်ဖြတ်တောက်ပြီး အဆိုပါဆုလက်ဆောင်ကုန်သွား၍သော်လည်းကောင်း သက်တမ်းကုန်သွား၍သော်လည်းကောင်း အခြေအနေမှသာ နောက်ဆုံးရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အား ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 5, 2017 ဒီဇင်ဘာ 18, 2020 Categories General mm
“ ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်ကို MPT က NLD ပညာရေးကွန်ရက်နှင့် အတူ ထပ်မံပူးပေါင်း၍ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၅ ခုတွင် ထပ်တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခွင့်အရေးနည်းပါးသည့်လူငယ်များကို ကွန်ပျူတာပညာဗဟုသုတများဖြန့်ဝေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိနေသော “ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ် ကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၅) ခုတွင် လက်တော့ပ် ကွန်ပြူတာ အလုံး (၁၀၀) ၊ Wi-Fi အင်တာနက် ဒေတာပံ့ပိုးခြင်းအပြင် သင်တန်းဆရာများဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကို ထပ်မံတိုးချဲ့ ထောက်ပံ့သွားမည်ဟု MPT က ယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။
MPT ၏ ပညာရေးကဏ္ဍ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကို NLD ပညာရေးကွန်ရက်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ အမေ့အိမ်စင်တာများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ယခုမှစတင်ကာ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
“ရှေ့သို့လှမ်းချီ ဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်ကို မြို့ပြနှင့်အလှမ်းကွာသည့် ဒေသများရှိ လူငယ်များ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပညာရေးတွင် ပိုမိုအသုံးချလာနိုင်စေရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသောဒေသများတွင် နေထိုင်ကြရသည့် လူငယ်များအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ နှင့် မြို့ပြ ဒေသများသို့ သွားရောက်၍ သင်ကြာရခြင်းထက် ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာဒေသများမှပင် နည်းပညာနှင့် သင်ကြားထောက်ပံ့မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားပေါင်း (၁,၀၀၀) ကျော်အနေဖြင့် သင်တန်းများ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချမှုများလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ယခုအစီအစဉ်ကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် NLD ပညာရေးကွန်ရက်ထံ လိုအပ်သည့် အထောက်အပံ့များကိုလည်း MPT က ယခုလို ဆက်လက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာ အတတ်ပညာ သင်တန်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါ သည်။
ယခုအခမ်းအနားကို Microsoft Office ကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများနှင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးချနည်းများကို သင်ကြားပေးနေသည့် သင်တန်း စတုတ္ထအသုတ်ကို ပြီးမြောက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသို့ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ချီးမြှင့်သည့်ပွဲနှင့်အတူ တစ်ပြိ်ုင်တည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် NLD ပညာရေးကွန်ရက် အမေ့အိမ်စင်တာ (၁၀) ခုတွင် သင်တန်းပြီးစီးခဲ့သည့် ကျောင်းသား (၂၆၀) အတွက် အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း အလိုက် ကိုယ်စားသင်တန်းသားများက တက်ရာက်လက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
“MPT အနေနဲ့ NLD ပညာရေးကွန်ရက်လို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပညာရေးကဏ္ဍကတစ်ဆင့် မြန်မာလူငယ်တွေကို အားအင်တွေပေးသွားဖို့ အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေက အခွင့်အရေးနည်းပါးတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေက ကျောင်းသားအများအပြားကို အလျင်အမြန် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အနာဂတ် သက်မွေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နေရာတွေမှာ ရရှိစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အစီအစဉ်ကို ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၅ ခုမှာ ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ အထူးပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒါဟာ အခွင့်အရေးနည်းပါးတဲ့့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေမှာပါ” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သော Mr.Yoshiaki Benino က ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ Mr.Benino က “MPT အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရှေ့ကိုလှမ်းချီနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေသလိုပဲ ပညာရေးနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အာရုံစိုက်ထားတဲ့ “တူညီလှမ်းချီ မျိုးဆက်သစ်တို့ အနာဂတ်ဆီ” ဆိုတဲ့ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း ဦးတည်ချက်ကတစ်ဆင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေကို အထောက်အပံ့တွေပေးသွားဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါဟာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေ လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ လူငယ်ကျောင်းသားတွေအတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကို တောက်ပ လာစေ မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစပြီး MPT က နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ NLD ပညာရေးကွန်ရက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းများတွင် သင်ကြားနေသော သင်တန်းဆရာများအတွက် ဉာဏ်ပူဇော်ခများအပါအဝင် လက်တော့ပ်ကွန်ပျူတာအလုံး (၂၀၀) နှင့် Router (၅၄) ကို ရန်ကုန်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းများအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် သင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား (၁,၁၄၉) ယောက်အထိ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT အနေဖြင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလည်း ယခုလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် နောက်လာမည့် (၃) နှစ်အတွင်း မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် နှင့် လက်တွဲကာ ဘောလုံးအားကစား မှတစ်ဆင့် ကျန်းမာကြ့ံခိုင်သော လူနေမှုဘဝပုံစံ၏ အရေးပါပုံကို မီးမောင်း ထိုးပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး အားကစားမှတစ်ဆင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 1, 2017 ဒီဇင်ဘာ 1, 2017 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm